Fifindrana aretina « Coronavirus » :: Olona iray voa rehefa nifampikasoka tamin’ny marary • AoRaha
Tranga voalohany no nahitana ny tsimok’aretina «Covid-19» tsy avy tamin’ ireo mpandeha fiaramanidina tonga avy ivelany. Olona iray monina eto Madagasikara no voamarina fa voan’ny «Coronavirus». Hita tao anatin’ireo nanaovana fitiliana dimy amby telopolo amby zato natao nanomboka afak’omaly tolakandro hatramin’ny omaly tamin’ny 12 ora antoandro izany. Ity olona iray ity no tranga vaovao hita ho an’ny omaly hatramin’ny 12 ora antoandro, araka ny vaovao azo avy eny amin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny ady amin’ny «Covid-19». Niampy roa hafa kosa ireo mpandeha avy any ivelany izay voamarina ho mitondra ny tsimok’aretina, omaly hariva tamin’ ny 5 ora. Enina amby roapolo izany izao ny olona voaporofo fa mitondra ny aretina “Coronavirus”.
Roapolo amby zato no nanaovana fitiliana, ny iraika ambin’ny folo tamin’ireo no vita hatramin’ny farany ka nahitana an’ireo olona roa vaovao farany ireo. Andrasana ny valin’ny fitiliana an’ireo sivy amby zato ambiny.
Mila fitandremana sy fampitomboana ny fahamailoana izao fifindrana aretina avy amin’ny fifampikasohana tamina marary izao fa tsy tokony hampikoropaka. Heverina hahatonga saina ny rehetra amin’ny fanajana ny fihibohana izany. « Aza misy mivoaka ao an-trano intsony isika. Olona iray ihany no tokony handeha hiantsena. Olona roa ihany no tokony handeha fiara. Hajao daholo ireo fepetra ireo. Izay ihany no antoka tsy hiitaran’ny aretina », hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny momba ny vaovaon’ny Coronavirus avy eny amin’ny ivon-toeram-pibakoana hiadiana amin’ny Covid-19 eny Ivato.
Lehilahy Malagasy, 32 taona, izay tsy nihetsika teto Madagasikara mihitsy iry voan’ny aretina Coronavirus avy tamin’ny fifampikasohana tamina marary iray, mpandeha fiaramanidina avy any ivelany iry. Vehivavy malagasy, 21 taona, kosa ny fanindroany, nandeha tamin’ny sidina Kenya Airways, tamin’ny 18 marsa 2020. Vehivavy ihany koa ny fanintelony, izay mbola tsy fantatra ny momba azy ankoatra ny nandehanany tamin’ny sidina Air Mauritius, tamin’ny 18 marsa 2020.
Ahiahy tany Fianarantsoa
Nohamafisin’itsy Profesora itsy fa ny efatra amin’ireo mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 no misy soritr’arerina: mitaraina reradreraka, manakotsako ny vatany manontolo, mikoha-maina ary ny iray nampiseho fahasemporana sy manavy saingy efa mitonitony. Misitraka fanafody afahahana mitsabo ny aretina ry zareo. Tsy misy ny aina nafoy fa arahi-maso isan’andro ny fahasalaman’ireo olona marary ireo.
Efa tonga eto Antananarivo kosa ilay olona noahiahiana avy any Fianarantsoa. Natoka-monina ary arahi-maso akaiky ny fahasalamany. Nisy ny fitiliana natao taminy izay iandrasana valiny. « Mitohy ny fitiliana hahafahana mijery faran’izay haingana an’ireo olona ahiahiana ho mitondra ny tsimok’aretina «Covid-19» », hoy ny fanazavan’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Ankoatra izay, nisahotaka ihany koa ny tao amin’ny fonjan’ Antanimora noho ny fisiana voafonja roa, teratany vahiny sy Malagasy, noahiahiana ho voan’ny “Coronavirus”. Natao ny fitiliana azy ireo. “Noentina teny amin’ny hopitaly Anosiala, izay nanaovana ny fitiliana, ry zareo. Fantatra fa tsy voan’ ny “Coronavirus””, hoy Razafimahefa Tianarivelo, minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana.
Fanamafisana hery fiarovana :: Nilaharana ilay fanafody vokarin’ny IMRA
Fiatrehana valanaretina :: Miantso fitonian’ny vahoaka ny fitondram-panjakana